"Govera PaHekita Iri Gore Rinotemesa Kugadzirwa Kwembatatisi" - Potatoes News
Kunyangwe hazvo nzvimbo yembatatisi yakadzikira zvakanyanya gore rino, goho rinogona kubuda kunge rakakwira. "Goho pahekita richange rakakura," akadaro North-Western European Potato Growers (NEPG).
Kuunganidzwa kwemasangano evarimi vembatatisi muNorthwestern Europe anoti zvimwe zvinhu zvinogona kutyisidzira purofiti gore rino zvakare. NEPG zvakare inocherekedza kuti mitengo yakaziva iyi chitubu yakanga yakakwira kupfuura mitengo inokurudzirwa naBelgapom.
Mwedzi wapera, VILT yatotaura kuti iyo mbatatisi nzvimbo muFlanders yakanga yadonha kekutanga mumakore . Kutevera kwakaipisisa gore rekona, 6.5 muzana mbatatisi shoma yakasimwa. MuBelgium seyakazara, uku kuderera kuri kunyange pa8.5 muzana, nepo maitiro munyika dzakavakidzana anga asinganyanye kusimba. Semuenzaniso, kuderera kuGerman kuri 3.5 muzana, varimi veFrance vari pasi ne3 muzana uye Netherlands iri -6.5 muzana. Izvi zvinoonekwa kubva pamanani kubva kuNEPG.
Kunyangwe kudzikira kweacreage, kugadzirwa kunogona kubuda kwakakwira, sekureva kwesangano. "Nekuda kwekunaya kwemvura, goho riri muchimiro chakanakisa, kunyangwe tichifanira kumirira kuti tione kumwe kuitika kwemamiriro ekunze," anotsanangura munyori weNEPG, Daniel Ryckmans.
Kumusoro kwechirwere kumanikidza uye kuwedzera kwemitengo yekugadzira
François Huyghe weBoerenbond anobvuma kuti kuisa tuber kwakanaka kwazvo gore rino, asi kuti chirwere chechirwere chakawedzera nekuda kwekuchinja kwetembiricha. Nekuda kwekuwedzera kwechirwere kumanikidza uye kunaya kwemvura, varimi vanomanikidzwa kurapa mbatatisi yavo zvakanyanya, nepo mutengo wemitengo yezvidziviriro zvezvirimwa wawedzera zvakanyanya "Mitengo yezvipembenene, simba nefetiraiza yakwira," akadaro NEPG. "Liquid nitrogen yakawedzera zvakapetwa kaviri mumutengo mumwedzi mishoma."
“Mitengo yemishonga yezvipembenene, simba nefetiraiza yakwira zvikuru. Liquid nitrogen yakawedzera zvakapetwa kaviri mumutengo mumwedzi mishoma
Daniel Ryckmans - Munyori weNorth-Western Europe Varimi vePatato
Mukupesana nemutengo wakakwira wemutengo, kuwedzera mukugadzirwa kunogona zvakare kutungamira kudzikisa mitengo yematapiri. Chikamu chakakura chembatatisi (70% muFlanders) chakatengwa uye chakatengeswa kutanga kwegore rino, zvichisiya dzinosvika makumi matatu muzana kumusika wepachena. "Kuwanda kwekugadzira uye kukwirira kwekuwanika pamusika wepachena, mutengo unodzikira," anodaro Ryckmans.
Iye munyori weNEPG anosimbisa kuti dambudziko rekona richiri rakarembera pamusoro pechikamu sebakatwa reDamocles, kunyangwe mamiriro ari kusimukira munzira kwayo. "Asi panogona kunge paine matanho anodzora anodzikisa kudiwa kwemachipisi akaomeswa nechando nezvimwe zvigadzirwa zvembatatisi."
Murimi anowanzo gadzira akanakisa margins pamusika wepachena, nepo kurima kwechibvumirano kazhinji kusingasviki kudhura. Gore rakapera mutengo pamusika wepachena wakadonha zvakanyanya uye mutengo wakaderera pazasi kwema euro (PCA / Fiwap kotesheni). Iko parizvino iri pa11 euros, ichiri chete chidimbu chemutengo mu2018 apo tani yetapiri yakaburitsa angangoita makumi matatu euros.
Mitengo yepamusoro yakabhadharwa pane Belgapom zvinyorwa
Nhengo dzeNEPG dzakacherechedzawo kuti mbatatisi dzakaburitsa zvakawanda mumwedzi yapfuura kupfuura mitengo inokurudzirwa neBelgapom, avhareji yemitengo yakabhadharwa nevatengesi neindasitiri yekugadzirisa. Iyo Belgapom kotesheni ndiyo inowanzo shandiswa mutengo wembatatisi iyo inogadziriswa kuita mazaya echando zvigadzirwa. "Varimi vaisada kutengesa mbatatisi nemitengo yeBelgapom, zvinova zvakamanikidza vamwe vatengesi kubhadhara mitengo yakakwira," anotsanangura kudaro Ryckmans, uyo akatambira zvikwangwani zvakadaro kubva kumasangano evarimi akati wandei.
Sekureva kwaHuyghe, izvi zviri nani kunze kwekusiyana. “Mitengo yeBelgapom inowanzo kupa mufananidzo wakanaka wemamiriro emusika. Sekureva kwemushandi wevarimi mubatanidzwa, zvinyorwa zveBelgapom hazvisiyane zvakanyanya neizvo zvePotato Cultivation Test Center (PCA). “Mutengo wePCA unosimudzwa pachishandiswa mibvunzo kubva kuvarimi. Kusiyana neBelgapom, PCA inoratidza mutengo uri munzvimbo ine mutengo wakaderera uye nemutengo wakakwira weiyo vhiki. "Makotesheni ese ari maviri akafanana uye anoratidza mamiriro emusika" iye anosarudza.
"Opbrengst pahekita imwe jaar doorslaggevend voor de aardappelproductie"
/ musika /
Tags: NEPGkukohwa kutsvamusika wembatatisichikamu chembatatisi
FarmVisionAI ™ Inoburitsa Nharembozha App yeIine Simba Mukati-memunda Chakagadzirwa Njere
MUTENGI CHITATU GUMZ, USA